जापानले बनायो स्क्रिनमा चाटेर खानाको स्वाद लिन मिल्ने टेलिभिजन - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा जापानले बनायो स्क्रिनमा चाटेर खानाको स्वाद लिन मिल्ने टेलिभिजन
संसार ढुङ्गे युगबाट बैज्ञानिक तथा प्रविधिमैत्री युगमा लम्की रहेको छ। यसै बिचमा संसारमा बिभिन्न खालका आविष्कारहरु भइरहेका छन्। कतिपय आविष्कारहरू हामीलाई बिश्वाश नै नलाग्ने खालका पनि भएका छन्।
उनका अनुसार यो टेलिभिजनको व्यवसायिक उत्पादनपछि यसको मूल्य ८७५ डलरसम्म पर्न सक्दछ । उनी भन्छन्- मानिसहरू आफ्नो घरमै बसेर संसारका कुनैपनि ठाउँका रेष्टुरेन्टमा पस्किने खानाको पनि स्वाद उठाउन सकून् भन्ने यसको लक्ष्य हो ।
Previous articleकैलालीका कक्षा १० मा पढ्ने चार विद्यार्थीले बनाए यस्तो कार
Next articleयो साताको मौसम कस्तो?कहाँ छ वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना ?कहाँ कस्तो रहने छ मौसम?
खुल्यो तेह्रथुम पावरको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कहिलेसम्म आवेदन दिन मिल्ने ?